Disadisam-piarahamonina Nadoboka am-ponja ireo mpanindrona voamaso
Ahiana ho lonilonim-piarahamonina no nahatonga ireo andian’olona nanindrona maso ny lehilahy iray. Any am-ponja ireo telo tamin’izy ireo no miandry ny fitsarana azy ireo.
Ny 25 may 2019 lasa teo, nisy olona nanao angaredona ny lehilahy iray teny amin’ny faritra ‘‘La Réunion kely» Ampefiloha ka nanesoran’izy ireo ny maso havian’ilay tovolahy. Nitory teny anivon’ny polisy avy ao amin’ny sampana ady heloka bevava sakelika faharoa ilay lehilahy ka natomboka ny fanadihadiana. Ny zoma 28 jona no tra-tehaka tetsy Ampefiloha ny olona efatra tamin’izy ireo. Fantatra fa ny lehilahy iray no nitazona sy nandavo azy tamin’ny tany, ny ramatoa iray no nanolotra ilay vy maranitra ary ny lehilahy iray nanindrona ny mason’ilay tovolahy. Nisy ihany koa vehivavy iray nosamborina saika hanodraka azy tamin’ny rano mangotraka. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, ireo fanindronana voamaso sy fikasana fanondrahana rano mahamay be ihany no nataon’izy ireo fa tsy nisy halatra velively. Natolotra ny fampanoavana izy ireo ka ny 3 naiditra am-ponja vonjimaika fa nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny 1.